Izihluthulelo Ezi-6 Zokuphumelela Kwenkonzo Yamakhasimende Usebenzisa Imidiya Yezokuxhumana | Martech Zone
NgoLwesihlanu, ngoDisemba 1, i-2017 Douglas Karr
Sabelane izibalo zokukhula kwenkonzo yamakhasimende kusetshenziswa imithombo yezokuxhumana, futhi le infographic iyithatha kancane, inikezela ngezikhiye ezi-6 ezihlukile zenkampani yakho ukuze ifake ukuqinisekisa impumelelo. Ukuhlinzekwa kwamakhasimende okunethezeka kungaphazamisa ukumaketha kwakho, ngakho-ke kubalulekile kubakhangisi ukuthi baqaphe imizwa nesikhathi sokuphendula ngemidiya yezokuxhumana.
Kokucwaninga okukodwa kwe-JD Power kwabasebenzisi abangaphezulu kuka-23,000 abasebenzisa i-inthanethi, ama-67% wabaphenduli babike ukuthi baxhumane nenkampani ngezinkundla zokuxhumana ukuxhaswa. Kodwa-ke, ukuba khona ezinkundleni zokuxhumana kukodwa akwanele. Ukuze lisetshenziswe ngempumelelo, ibhizinisi kufanele liqaphele ukuthi balalela kanjani, futhi okubaluleke kakhulu, ukuthi baphendula kanjani. Ukukhishwa Komhlaba Wonke
Nazi izinkinobho ezi-6, nge-infographic Amathiphu aphezulu wokusebenzisa imithombo yezokuxhumana ekuhlinzekweni kwamakhasimende, kusuka ku-Global Outsourcing:
Khetha Okuhamba phambili Ipulatifomu Yezokuxhumana Komphakathi Ifanele Izidingo Zebhizinisi Lakho - siyinxusa lalo I-Agorapulse engingayincoma kakhulu kunoma iyiphi inhlangano enkulu neyincane. Ipulatifomu iveza ukuxhumana kwakho kufana nebhokisi lokungenayo, okwenza izinkampani zikwazi ukuphendula noma ukudlulisa izindaba ngokuphendula kahle.
Gada Okushiwo Komphakathi - Amakhasimende namathemba azokukhuluma ezinkundleni zokuxhumana ngaphandle kokukumaka noma ukukhuluma nawe ngqo. Kubalulekile ukuthi usebenzise ipulatifomu lapho ungaxwayiswa khona lapho kukhulunywa ngokuqhubeka nezinkinga zamakhasimende. Lesi esinye isici esihle se- I-Agorapulse, Konje.
Sebenzisa le Ithoni Lakwesokudla Lezwi Lingaguquguquki - izimpendulo ze-sassy azihumushwa kahle njalo ku-inthanethi, ngakho-ke qiniseka ukuvumelanisa impendulo yakho nesicelo esenziwayo. Ithimba lakho lidinga ukunakekela… futhi lizwakale sengathi bayakhathalela… ukuze ungaphinde uhlolisiswe noma ugxekwe yinethiwekhi yomuntu ngamunye.
Khumbula i Okufanele ukwenze nokungafanele ukwenze kwezokuxhumana - ungawanaki, ususe noma ufihle imibono, zivikele, uzibandakanye nama-troll, noma ucindezele amakhasimende akho ngolwazi oluningi kakhulu. Ingabe uyababonga ngokukwazisa ngalolu daba, wamukele ukukhathazeka kwabo, futhi uxolise ngenkinga. Ngaphezu kwakho konke, qiniseka ukuthi ungafinyelela esinqumweni esenza ikhasimende lijabule.
Sebenzisa i- Isizinda Solwazi - Ama-91% wabathengi abakwi-inthanethi bathe bangasebenzisa isisekelo se-onldge base ukube besitholakala futhi sihambisana nezidingo zabo I-Knowledge Base inganciphisa amathikithi okuxhasa, ithumele imiphumela ngokushesha, futhi igcine amakhasimende ajabule.
Yazi ukuthi kufanele uluthathe nini udaba ungaxhunyiwe ku-inthanethi - iforamu yomphakathi efana nemithombo yezokuxhumana kungenzeka ingabi yindawo engcono kakhulu yamakhasimende acasukile nezinkinga eziyinkimbinkimbi. Kuvamile ukucela ikhasimende ukuthi likulandele, lixhumane nalo ngomyalezo oqondile, bese uhambisa ingxoxo ungaxhunyiwe ku-inthanethi ngocingo noma ubuso nobuso lapho ungabasiza khona kahle.
Tags: Insizakalo yekhasimendeinfographic yesevisi yamakhasimendeimpumelelo yamakhasimendeukukhishwa komhlaba jikeleleinfographicsocial mediaimithombo yezokuxhumana infographic
Ikusasa Lezinkontileka Zokuzisebenzisa Zisebenzisa iBlockchain